संविधान दिवसको उत्सवले जनतालाई किन छोएन ? –
संविधान दिवसको उत्सवले जनतालाई किन छोएन ?
संविधान जारी भएको चार वर्ष पुरा भएको छ । उक्त अवसरमा शुक्रबार सरकारले संविधान दिवस मनाइरहँदा संविधान प्रति असन्तुष्ट राजनीतिक दल र समुदाय भने अझै असन्तुष्ट छन् । उनीहरुले संविधान संशोधनको माग गर्दै विरोध समेत जनाएका छन् ।
संविधान दिवसको अवसरमा सरकारले शुक्रबार खुसीयालीका साथ दिपावली मनाइरहँदा मधेस केन्द्रीत दल राजपाले भने कालोदिनका रुपमा मनाएको छ । लालआयोगको प्रतिवेदन गुपुचुप राखिएको र संविधान संशोधन गर्ने पक्षमा सरकार नदेखिएको भन्दै राजपाले सरकारसँग गम्भिर असहमती जनाउँदै आएको छ । त्यसै अनुरुप उनीहरुले संविधान संशोधनको माग राख्दै शुक्रबार प्रदेश २ मा ब्ल्याक आउट समेत गरेको छ ।
नेपाली जनताको सात दशकको कठोर संघर्षबाट प्राप्त संविधान निर्माण भएको चार वर्षसम्म पनि सर्वस्वीकार्य हुन नसक्नु दुःखत विषय हो । मधेसले कालोदिनका रुपमा संविधान दिवस मनाइरहँदा आदिवासी जनजातिहरुले विरोध कार्यक्रम गरेका छन् । उनीहरुले संविधान आदिवासीको पक्षमा नरहेको भन्दै विरोध गरेका हुन् । आदिवासीको आन्दोलनलाई दवाउनका लागि सरकारको प्रयास जारी रहेकाले झन ससक्त भएर लागिरहेको उनीहरुको भनाइ छ ।
संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर सत्ता घटक समाजवादी दलले पनि आवाज उठाइरहेका छन् । संविधान मधेसी जनताको विरुद्धमा रहेको उनीहरुको ठम्याइ छ । संविधान संशोधनको लागि नै आफुहरु सरकारमा सहभागी भएको जनाउँदै उनीहरुले सरकारका क्रियाकलापका कारण पर्ख र हेर को अवस्थामा रहेको बताउँछन् । अन्यथा आफ्नो दल सरकारबाट बाहिरिने समाजवादी दलको बताउदै आएको छ ।
सिंगो मधेसका प्रतिनिधित्व गरिहेका दल राजपा, समाजवादी दल र आदिवासी जनजातिहरु संविधान संशोधनको पक्षमा छन् । जनताको सात दशकको कठोर सर्घषबाट प्राप्त दस्तावेजलाइ यसरी सधैभरी विवादित बनाइराख्नु राम्रो होइन । तत्कालिन अवस्थामा ४७ सालमा जनताले प्राप्त गरेको संविधान खारेजहुँदाको परिणामलाई पनि हामीले विर्षनु हुँदैन ।
संविधानको विरोधमा आदिवासी जनजाति महासंघले काठमाडौँको बसन्तपुरमा प्रदर्शन सम्ेत् गरेको छ । संविधान संशोधन गर्न माग गर्दै आदिवासी जनजातिहरुले प्रदर्शन गरेका हुन ।
प्रदर्शनसँगै संविधान जलाउने क्रममा प्रहरीले दुइ जनालाइ पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा थरुहट थरुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सिताराम चौधरी सहित अन्य एक जना रहेका थिए ।
संविधानमा मधेसी र आदिवासी जनजातिहरुको हक अधिकार कुण्ठित गरिएको भन्दै आदिवासी जनजातिले संविधानको धारा १ सय ७४ नै खारेज गर्न माग समेत गरेका छन् ।
आदिवासी जनजातिहरुले संविधान सर्वस्वीकार्य बनाउन माग गर्दै शुक्रबार बेलुकी ७ बजेदेखि साढे साते बजेसम्म आधाघण्टा मुलुकभर ब्ल्याक आउट कार्यक्रमको समेत आयोजना गरेका थिए । त्यसै गरि संविधानको विरोध जिल्लाका दाङ,कपीलवस्तु,पर्सा,धनुषा,सुनसरी बाके लगाएत सुधुरपश्चिमका जिल्ला कञ्चनपुरमा पनी विरोध गरिएको पाईएको छ ।
« यसरी भिड्दैछन ऋतिक र प्रभास,कस्ले मार्ला बाजी ?
आयल निगमले खाना पकाउने ग्यास र हवाई इन्धनको मूल्य घटायो »